Archive du 20190227
Manenjana ny sendikan’ny polisy “Avereno aminay ny asanay”
Nisy ny fivoriambe tsy ara-potoana nataon’ny sendikan’ny polisim-pirenena omaly talata 26 febroary niresahana ny lafiny fiandraketana ny fanamboarana ny pasipaoro nosintonin’ny fanjakana amin’ny polisy.
Lonilony politika Sakana amin’ny fampandrosoana ny firenena
Voafatotry ny fisamatsamahana ara-politika tanteraka ny firenena amin’izao fotoana izao ka manomboka miseho tsikelikely ny fiantraikany ratsy.
Dinika momba ny fampihavanana anio Manasa ny mpitondra sy ny mpitandro ny filaminana ny CFM
Hotontosaina anio alarobia 27 febroary 2019 hariva etsy amin’ny Arrupe Faravohitra ny famelabelaran-kevitra arahana adihevitra momba ny fampihavanana izay karakarain’ny filankevitra momba izany na CFM.
Nicolas Randrianasolo « Halaviro ny fanenjehana ara-politika »
Nivoaka tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo ny didim-panjakana lah. 2019-189 entina hamerana ny isan’ny solombavambahoaka ho 151 sy ny fari-pifidianana manerana ny nosy. Rariny, hoy ny solombavambahoaka teo aloha,
Fifidianana solombavambahoaka Hifampitady ny TIM sy ny MAPAR
Miisa 151 ireo solombavambahoaka handrafitra ny antenimieram-pirenena. Miisa 2 avy ho an'ireo distrika enina eto Antananarivo Renivohitra.
Kandidà solombavambahoaka Maro ireo mbola nangataka fanazavana teny amin’ny OVEC
Tsy mbola mazoto angamba na manana paikady manokana ireo mpirotsaka hofidiana ho solombavambahoaka kanefa dia nisokatra omaly ny fotoana ahafahana mandray anjara amin`ny fifidianana ny 27 mey 2019 ho avy izao.
Fiovaovan’ny toetr’andro Hanimba ny vokatra raha tsy hiomanana
Tombanana ho 2 hatramin’ny 3 taonina isaky ny hektara ny voka-bary eto Madagasikara ary rehefa tsara ny vokatra dia mety mahatratra hatrany amin’ny 5 taonina isaky ny hektara.
Lalaon’ny nosy andiany faha-10 Nahazo fitaovana raitra avy amin’ny Sinoa ny atleta Malagasy
Notanterahina teny amin’ny Asia & Africa hotel eny Ivato omaly talata 26 febroary 2019 ny dingana faha-3 amin’ny tetikasa “Assistance de la Coopératioon Technique du Sport Chine-Madagascar”
Vehivavy mpilalao baolina lavalava Miisa 510 no anaty klioba hatreto
Ny taona 2011 no nanomboka nisy baolina lavalava sokajy vehivavy teto afrika fa ny taona 2010 no nanomboka taty amin’ny ranomasimbe indianina.
Ligin’ny baolina kitra Matsiatra Ambony Tompondaka 2019 sokajy D-1 ny Zanakala Fc
Tompondakan’ny baolina kitra sokajy D-1 any amin’ny ligin’i Matsiatra Ambony 2019 ny Zanakala Fc izay nandresy an-dry zareo Fc Lam tamin’ny isa 5-0 teo amin’ny lalao famaranana notontosaina tamin’ny alahady 24 febroary 2019 tao
Rallye Passion Antsirabe Andiany voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondaka 2019
Ny Rallye Passion hotontosaina any Antsirabe ny 19-20-21 aprily 2019 ho avy izao no hanokatra ny andiany voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ity taona 2019 ity.
Revo amin’ny kajikajy indray !
Ny hazakazaka hahazo ny seza etsy Tsimbazaza indray izao no tena handanian’ny mpanao politika eto amin’ny firenena rondoha. Na ny ao anatin’ny fitondrana na ny mpanohitra dia samy miketrika mafy amin’izao.
ECCOVA Nanofana mpianatra 18.000 tao anatin’ny 25 taona
Ivontoerana mampianatra zaitra miezaka miady amin’ny fitobahan’ny friperie sy manome vahana ny vita Malagasy eto amintsika ny Eccova.
Fanafody tsy ara-dalàna amidy etsy sy eroa Mitaraina mafy ireo farmasiana
Mihamahazo vahana hatrany ireo varotra fanafody tsy ara-dalàna eto amintsika. Ankoatra ireo fahita mahazatra eny amin’ny tsena madinika toy ny épicerie dia tsy lazaina intsony ny eny Ambohipo izay toerana ahitana ireo karazam-panafody rehetra amin’ny vidiny mora.
Kitrotro sy Bonibony Ireo no nafangarontsika tato ho ato, hoy ny dokotera
Ny otrikaretina VZV na “virus varicelle zona”, hoy ny dokotera Domoina Soakanto Rakotonoely, mpitsabo ny aretina kitrotro sy ny fianakavian’ity aretina ity, no tena miparitaka tato ho ato
Mirongatra ny asan-jiolahy Zaza amam-behivavy telo lasa takalon’aina
Toerana samihafa, andro iray. Zaza dimy taona tany amin’ny Faritra Amoron’i Mania sy tovovavy roa tany amin’ny Faritra Boeny no lasan’ny mpanao ankeriny, tamin’ny alahady teo.
MANAFIKA TSENA NY DAHALO
Ny tsena mihitsy no notafihan’ny dahalo tany Ambalakindresy, ao Ambohimahasoa. Amin’ny folo ora atoandro izay tena maha-betsaka ny olona teo an-toerana no tonga ny dahalo nanao ny asaratsiny.
Minisiteran’ny raharaham-bahiny Mpiasa “ECD” an-jatony very asa
Mpiasa an-jatony no tapaka fifanaraham-piaraha-miasa eo anivon'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny taorian'ny fivoahan’ny “note de service N°19/128 AE/SG/DRH/SAP” ny 22 febroary lasa teo.
Boriborintany faha-3 sy faha-5 Lakandrano mirefy 1,300 km nodiovin’ny CUA
Teny amin’ny lakandrano Andrianampoinimerina mirefy 1,300 km ao amin’ny boriborintany faha-3 sy faha-5, kaominina Antananarivo
Taksibe mihazo ny RN 1 Hampiakatra saran-dalana avokoa amin’ny volana martsa
Hampiakatra ny saran-dalany avokoa ireo taksibe ao anatin’ny zotra Kofiamo trans mampiasa ny lalam-pirenena voalohany mivondrona ao anatin’ny fivondronan’ny mpitatitra ivelan’Antananarivo Renivohitra na ny UCTS manomboka ny 10 martsa ho avy izao.
Fahasalamana sy fanatanjahantena Hifanampy hijery ireo mpiasam-panjakana ny Asief sy ny ANS
Ny 75 %-n’ireo mpiasam-panjakana eto amintsika amin’izao no fantatra fa mijanona anaty birao fotsiny fa tsy manao fanatanjahantena.
ALASORA Fanasarahana mpivady niady no nidirana am-ponja
Saika hamonjy ilay ramatoa mpiara-miasa aminy am-bava loza saika notrobaran’ny vadiny zava-maranitra ny maraina ireo dimy lahy no voarohirohy fa nahafaty ilay rangahy ny hariva.
Banky iraisam-pirenena Manadihady aloha vao mety hanohy ny fiaraha-miasa
Nihaona tamin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian teny Mahazoarivo omaly ny delegasiona avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena,
Fahapotehan’ny JIRAMA Iza anefa no tena tompon’antoka ?
Nalaza be indray tato ato ny orinasa JIRAMA. Nolazaina hoe orinasa tokony ary tsy maintsy miasa ho an’ny vahoaka.